आलमको बयान सकियो, साविती बयान दिएको एक मात्र प्रश्न के थियो ? ५० प्रश्न अस्वीकार ! « Lokpath
२०७६, २१ कार्तिक बिहीबार १३:५१
आलमको बयान सकियो, साविती बयान दिएको एक मात्र प्रश्न के थियो ? ५० प्रश्न अस्वीकार !
प्रकाशित मिति : २०७६, २१ कार्तिक बिहीबार १३:५१
काठमाडौं । हत्या आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली कां‌ग्रेसका नेता तथा सांसद मोहम्मद अफताव आलमको जिल्ला अदाललत रौतहटमा बयान सकिएको छ । तीन दिनदेखि जारी बयान बिहीबार सकिएको हो । अब थुनछेक बहस हुनेछ ।
आलमलाई जम्मा ५१ वटा प्रश्न सोधिएको छ । आज तेस्रो दिनको बयानमा उनलाई ज्यान मार्ने उद्योग र बम विष्फोट सम्बन्धी कसुरबारे प्रश्न सोधिएको थियो । न्यायाधीशले सोधेको अधिकांश प्रश्नको आलमले अस्वीकार गरेका छन् ।
तत्कालीन समयमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो भन्ने प्रश्नमा मात्रै आलम ले हो त्यसबेला मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको बताएका थिए । आलमले यही एक मात्र प्रश्नको साविती बयान दिएका छन् ।
काठमाडौं । गाईलाई हिन्दूधर्मावलम्बीहरु गौमाता तथा लक्ष्मीस्वरुपाका नाले पुकार्ने गर्दछन् । गाईको सेवा
काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को कारण ज्यान